Dagaal ka dhacay Waafdhuug oo gumaysiga lagu naafeeyay.
Ciidamada Wayaanaha oo Diridhabe dad ku laayay.
Magaalada Gaalkacyo oo lagu dhacay baabuur Ogadenya laga leeyahay.
Boqollaal Itoobiyaan ah oo ku tabaalaysan magaalada Boosaaso.
Talyaaniga oo raba in ciidamada Soomaaliya la gaynayo lagu daro kuwo Yurub ah.
Dagaal ba’an oo 6/09/2004 ciidamada xoraynta Ogadenya iyo kuwa cdowga Itoobiya ku dhex maray magaalada Waafdhuug oo ka tirsan gobolka Doollo, ayaa ciidamada cadowga lagaga dilay 15 askari, sidaas waxaa qortay shabakada internetka ee Qoraxay Online.
Ciidamada xoraynta Ogadenya ayaa la sheegayaa inay weerareen ciidan gumaysiga Itoobiya ka tirsan oo halkaas maryay, waxaana la filayaa in dhimashada soo gaadhay ciidamada cadowga ka sokow ay qaar badan oo kalana dagaalkaas kaga dhaawacmeen.
Dhinaca kale sidii caadada u ahayd ciidamada gumaysiga Itoobiya waxay nawaaxiga Waafdhuug ku dileen nin rayad ah oo aan wax denbi ah gaysanin, kaasoo la sheegay
inuu gurigiisa ku sugnaa markii la dilay.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa toddobaadkii hore 37 qof in kabadan ku dilay, 100 kalana ku dhaawacay magaalada Diridhabe, ka dib markii ay rasaas oodda kaga qaadeen dad ku xoonsanaa suuq ganacsi oo ku yaalla badhtamaha magaalada Diridhaba.
Wuxuu dilkani dhacay ka dib markii ay ganacsatadu ka hortegeen isku day ay ciidamada booliska ee gumaysiga toobiya isku dayayeen inay ku boobaan hantida ganacsatada. Markaas ka dib ayay ciidamada boolisku rasaas ku fureen dadkii iska caabiyay, waxaana halkaas ku dhintay in ka badan 37 qof oo rayad, halka in ka badan 100 kalana ay kaga dhaawacmeen.
Ciidamada booliska ayaa la sheegay inay markaas ka dib si xad-dhaaf ah u boobeen hatidii halkaas taallay.
Raadiye ay Oromadu leeyihiin ayaa sheegay isaguna in bishii hore dabka la saaray inta badan ganacsigii ay dadka Oromada ahi ku lahaayeen meesha lagu magacaabo Hara Maya.
Waxaa badhtamihii toddobaadkan lagu dhacay magaalada Gaalkacyo gaadhiga laga leeyahay magaaladda Qabridaharre ee wadanka Ogadenya.
Gaadhigani wuxuu ka baxay magaalada Gaalkacyo, wuxuuna rar u siday dhinaca gobolka Qorraxay, hase yeeshee dablay hubaysan ayaa jidka u gashay oo ku joojisay duleedka magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo rakaabkii ku armay inay gaadhiga ka degaan.
Waxay wararku intaas ku darayaan in gaadhiga uu kirishboogu cilid ku abuuray si aanay u kaxaysa dablaydani, kadibna uu ka cararay dablaydii iyo gaadhigiiba isagoo u soo cararay dhanka Magaaladda Gaalkacyo.
Ciidanka Booliiska ee magaalada Gaalkacyo ayaa Baabuurkaas raadco ka daba-diray , ka dib markii loo soo sheegay in la dhacay, hase yeeshee waxay u tegeen Baabuurkii oo yaalla meeshii hantiilaha lagaga dhacay, waxaana la filayaa inay dablaydu iskaga tegeen, ka dib markii ay baabuurka cilladi ka gashay.
Warar kale ayaa sheegaya in dablayda Baabuurkan qabsatay uu hor-kacayay nin Baabuurka horay u lahaan jiray, balse milkayadiisa laga wareejiyay, ka dib markii xaq loo bixiyay, wuxuna ninkaasi sheegay in Baabuurka laga wareejiyay isagoon raalli ka ahayn.
Gaadhigani wuxuu hadda ku jiraa gacanta Ciidanka Booliska ee magaalada Gaalkacyo, waxaana socda wada-hadal lagu dhexdhexaadinayo milkiilaha gaadhiga iyo raggii ku qabsay.
Radiyo SBC ma ku guulaysan doonaa in uu Puntland oo burburiyo.
Qore: jagne dahir
Sida uu qoray boga Internetka Idaacada SBC waxaa magaalada Boosaaso gaadhay dad aad u badan oo Itoobiyaan ah, kuwaas oo ka soo galay dhinaca gobolka Sanaag.
Mid ka mid ah dadkaas ayaa u sheegay Idaacada SBC in waxii ay haysteen ee hanti ahaa lagaga dhacay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco, haatanna ay fara maran yihiin oo aanay wax ay ku joogaan iyo si ay u noqdaan toonna garanaynin, dhacaas ayuu nikaasi ku
sheegay in ay u gaysteen niman mukhalisiin ah oo u sheegay in ay u tahriibinayaan wadamada carabta.
Dadweynaha deegaanka Boosaaso ayaa soo gelitaankoodii hore dadkan kaalmo aan sidaas u buurnayn u fidiyey, gaar ahaan ururro waddani ah.
Dhinaca kale waxaa jira warar soo gaadhay Radio xoriyo oo sheegaya in ay goosteen ciidamo aad u badan oo ku sugnaa gobolada Ogaadenya, kuwaas oo la sheegey in ay u dhaqaaqeen dhinaca xuduudaha wadamada dariska ah, balse aan la hayn halka ay ku danbeeyeen.
Siyaasada guracan ee Taliska Itoobiya ayaa sababay in ay ooda jabsadaan siyaasiyiintii, aqoonyahankii, ciidamadii iyo dadkii shacbka ahaa Beeralayda ahaa, kadib markay ku kalsoonaan waayeen xaaladooda amaan iyo nololeed ee dalkooda ka jirta maanta.
Dawlada Talyaaniga ayaa ku talisay in ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya loo gaynayo lagu daro kuwo laga keeno dalalka Yurub.
Wasiirka arrimaha dibada ee dalka Talyaaniga Franco Frattini ayaa sheegay in xukuumadda dalkiisu ay kula talisay Midowga Afrika in ciidamada nabad ilaalinta ah ee Soomaaliya la gaynayo lagu soo daro kuwo ka socda dalalka Yurub.
Frattini wuxuu intaas ku daray in dawlada Talyaanigu ay dhiirri gelinayso in qorshahaas la hirgelinayo, isla markaana ay ciidamada dalkiisu ka qayb qaadan doonaan hawsha nabad sugida iyo hub ka dhigista ah ee Soomaaliya loo tegayo.
Talyaanigu wuxuu sheegay inuu aad ugu niyad san yahay natiijada ilaa iyo hadda ka soo baxday shirka dib u-heshiisiinka kooxaha soomaaliyeed ee dalka Kenya ka socda, kaasoo hadda maraya marxaladdii ugu denbaysay ee awood qaybsiga ahayd.